ကုလတွင် မြန်မာအရေးလှုပ်ရှားမှု အာဆီယံနိုင်ငံထဲက ဘယ်နိုင်ငံက ဒလံလုပ်နေလဲ ? – MC Tv Club
ကုလတွင် မြန်မာအရေးလှုပ်ရှားမှု အာဆီယံနိုင်ငံထဲက ဘယ်နိုင်ငံက ဒလံလုပ်နေလဲ ?
ကုလသမဂ္ဂမှာ မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး Liechtenstein နိုင်ငံက အဆိုပြုမူကြမ်းတစ်ခုကို အခုလဆန်းပိုင်းက တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှုကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ဖို့တစ်ရက်အလိုမှာဘဲ ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ကုလသမဂ္ဂ (UN)က ရွေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
ဘာကြောင့် ကုလသမဂ္ဂက ရက်ရွေ့ဆိုင်းလိုက်လဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်း အတိအကျကိုတော့ နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မဖော်ပြနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ သတင်းတွေအရ ကုလသမဂ္ဂကိုတင်သွင်းတဲ့ Liechtenstein နိုင်ငံက အဆိုပြုမူကြမ်းမှာ မြန်မာစစ်တပ်ကို လက်က်မရောင်းချဖို့တောင်းဆိုမှုတွေပါဝင်နေပါတယ်။ ဒီအချက်ကို အာဆီယံနိုင်ငံတွေအားလုံးက သဘောမတူဘူးဆိုတဲ့ သတင်းတွေလဲ နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြလာပါတယ်။
ဒါကြောင့် မြန်မာစစ်တပ်ကို လက်နက်မရောင်းချဖို့တောင်းဆိုမှုတွေ ဖြုတ်ချပေးဖို့ အဆိုပြုမူကြမ်းတင်သွင်းထားတဲ့ နိုင်ငံကို အာဆီယံနိုင်ငံတစ်ချို့က ဖိအားပေးမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာအရေးမဲခွဲဆုံးဖြတ်မဲ့ ကုလသမဂ္ဂ (UNGA)အစည်းအဝေးကို ရွေ့ဆိုင်းလိုက်ရတာလားဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာရှိနေပါတယ်။
မတ်လ ၃၀ရက်ဒီနေ့မှာတော့ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး Teddy Locsin Jr . က မြန်မာစစ်တပ်ကို လက်နက်ရောင်းချဖို့ တားမြစ်တဲ့ ကုလရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အာဆီယံကပိတ်ပင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ ၎င်းရဲ့ လူမှုကွန်ယက်မှာထုတ်ဖော်ရေးသားလာပါတယ်။
အာဆီယံကပိတ်ပင်တာကိုလည်း မိမိတို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အနေနဲ့လည်း မသိရှိရကြောင်း ပြောဆိုလာပြန်ပါတယ်။
အဲဒီလိုပါပဲ မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာ အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကနိုင်ငံတော်သမ္မတ ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ ဘုံသဘောတူညီချက်တစ်ချို့ပါဝင်လာခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့် အာဆီယံနိုင်ငံတွေကြား ပဟေဠိဆန်ဆန်ဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။
လက်ရှိမှာ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ အလှည့်ကျ ဥက္ကဌ တာဝန်ကို ဘရူးနိုင်း နိုင်ငံကတာဝန်ယူထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု အများဆုံး နိုင်ငံက စင်္ကာပူနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာနိုင်ငံတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ R2P အစီစဉ်ထည့်သွင်းရေးအတွက် မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုမှာ ဘရူးနိုင်း နဲ့စင်္ကာပူကကြားနေခဲ့ပြီး အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက မထောက်ခံခဲ့ပါဘူး ။
Previous Article အာဏာရူးတစ်စု ရဲ့ ကျဆုံးခန်းကိုပြည်သူတွေ အားရဝမ်းသာစွာကြည့်ကြရဦးမှာလို့ တိုင်းအမတ်ဟောင်း ဦးနေဘုန်းလတ်ပြောကြား
Next Article အကြောင်းမဲ့ အသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ အနာဂတ် ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်လာမဲ့ မော်ဒယ်ထက်အောင် အမေရဲ့ နူတ်ဆက်စကား